Wasiir Nuux: Xanuun badan ayay nagu haysaa Shaqo la’aanta Dhallinyarada – Radio Muqdisho
Wasiir Nuux: Xanuun badan ayay nagu haysaa Shaqo la’aanta Dhallinyarada
Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux ayaa sheegay in ka Wasaarad ahaan ay dhibayso shaqo la’aanta haysata Dhallinyarada Soomaaliyeed xilli dalka la doonayo inay Horumariyaan Dhallintiisa.
“Xanuun badan ayay nagu haysa shaqo la,aanta dhallinyarada xarumaha waxbarashada waxa ay soo saaraan dhallinyaro aqoon leh kuwaas oo u baahan in ay helan shaqooyin wanaagsan, ka wasaarad ahaan shaqo abuurka dhallinyarada waxa ay noo tahay ahmiyadda koowaad” Ayuu yiri Wasiir Nuux.
Wasiirka ayaa tilmaamay in ka wasaarad ahaan ay Arrimaha Horumarinta Dhallinyarada Dadaal dheeriya ku bixidoonto si dalku uu u helo Awoodda Dhalliyaradiisa.
“Wasaaraddu si shaqo loo helo waxa ay diyaarisay 20 Dhallinyaro kuwaas oo labaray xirfadda gacanta si shaqadooda ay u horumariyaan Wasaaraddu waxa ay siisay qalab ay ku fuliyaan shaqadaas arrintaasna wasaaraddu way kuguulaysatay” Ayuu yiri Markale Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya.
Horumarinta waddan kasta oo dunida ku yaalla waxa ay ku xiran tahay dhallinyaradiisa Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaana si arrintaas loo helo wadda dadaallo waxbadan loogu qabanayo Dhallinyarada si niyad ay ugu Yeeshan horumarinta dalkooda.
Taliyaha Booliska oo kulamo la leh saraakiisha booliiska Puntland
Taliyaha Booliska” waxaan ka qayb galidoonaa Munaasabad Tababar loogu soo xirayo Saraakiil ka tirsan Puntiland
Taliyaha Booliska" waxaan ka qayb galidoonaa Munaasabad Tababar loogu soo xirayo Saraakiil ka tirsan Puntiland